DAAWO:Xiisad kacsanaan ah oo laga dareemayo Yubbe & Saraakiil ku hanjabay dagaal – Puntlandtimes
BADHAN(P-TIMES)- Xaalad kacsanaan ah ayaa waxaa laga soo sheegayaa deegaanka Yubbe ee gobolka Sanaag, halkaas oo ay isku hor fadhiyaan ciidamada Somaliland iyo Puntland.
Saraakiisha ciidamada Puntland ee ku sugan furimaha hore ee deegaanka Yubbe ayaa ku dhawaaqay xaalad dagaal, waxaana iyaguna caawa ku sugan ku sugan deegaankaasi madax ka socota dowladda Puntland kuwaas oo maalmihii ugu dambeeyey safaro kala duwan ku marayey goboladda Hayland iyo Sanaag.
Waftigani ka kooban gollayaasha dowladda Puntland, saraakiil ciidan iyo maamulka gobolka Sanaag ayaa socdaal dhanka dhulka ah ku tagay deegaano dhowr ah oo ay kamid tahay degmada Hadaaftimo ee gobolka Sanaag.
Gudoomiyaha gobolka Sanaag iyo saraakiisha ciidamada ayaa ugu baaqay ciidamada Somaliland in ay iskaga baxaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Sanaag, waxaana jira xiisad culus oo caawa laga dareemayo deegaanka.
Gaadiidka gaashaaman ee dagaalka iyo ciidamo badan ayaa kusii qul qulaya deegaanka Yubbe, waxaana iyaguna heegan ku jira ciidamada difaaca Puntland oo masaafo yar ay u dhaxayso ciidamada Somaliland.